(tonga teto avy amin'ny Fitsanganana amin'ny maty)
Ny fitsanganan-ko velona na fitsanganana amin' ny maty dia ny fiverenan' ny efa maty ho amin' ny fiainana indray. Isan' ireo finoana lehiben' ny Kristiana ny fitsangana-ko velona. Ny fitsanganan' ny maty ho velona dia midika fa haharitra any amin' ny tontolo hafa ny fiainana ka mifandray amin' ny fitsarana farany hataon' Andriamanitra amin' ny olona rehetra izany. Ny olona nanao ny tsara araka ny didin' Andriamanitra fahavelony sy voavela heloka dia hitsangana ho amin' ny fiainana ao amin' ny Fanjakan' Andriamanitra izay torin' ny irak' Andriamanitra indrindra ny Mesia. Ireo olona nanao ny ratsy sy tsy nibebaka dia halefa any amin' ny gehena na ny helo. Roa ihany ny olona fantatra araka ny Baiboly fa nanangana olona tamin'ny maty, dia i Elia mpaminany sy i Jesoa (na Jesosy).
Fananganana an' i Lazarosy amin' ny maty, sary nataon' i Boloch.
1.1 Fahagagana fananganana amin' ny maty
1.2 Fitsanganan' olona maro
2.1 Fahagagana fananganana amin' ny maty
2.2 Fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty
2.3 Fitsanganan' ny maty niaraka tamin' ny an' i Jesoa
2.4 Fitsanganana amin' ny maty amin' ny andro farany
3 Ao amin' ny fanekem-pinoana
3.1 Ao amin' ny Fanekem-pinoana nikeana
3.2 Ao amin' ny Fanekem-pinoan' i Atanasio
3.3 Ao amin' ny Fanekem-pinoana apôstôlika
Tsy izay voasoratra ao amin' ny Testamenta Vaovao ihany no manamafy ny finoan' ny Kristiana ny fitsanganana amin' ny maty fa ny voalaza ao amin' ny Testamenta Taloha koa, araka ny fahazoany azy, indrindra ny ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka sy ny Bokin' i Ezekiela ary ny Bokin' i Daniela.
Fahagagana fananganana amin' ny matyModifier
Ny fitsanganana amin' ny maty voalohany resahina ao amin' ny Testamenta Taloha dia ilay notanterahin' ny mpaminany Elia tamin' ny zanak' ilay vehivavy mpitondra tena niantranoany, araka ny hita ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka. Fahavelomana manam-petra no vokatr' izany ka tsy mahasakana ny hahafatesana indray:
"19 Ary hoy Elia taminy: Atolory ahy ny zanakao. Dia naka ny zaza teo an-tratran-dreniny izy ka nitondra azy niakatra ho any an-efi-trano ambony izay nitoerany, ary nampandry azy teo am-pandriany. 20 Dia nitaraina tamin' i Jehovah izy ka nanao hoe: Jehovah Andriamanitro ô, efa nahatonga loza koa tamin' ny mpitondratena izay nivahiniako va Hianao ka nahafaty ny zanany? 21 Dia niampatra intelo tamin' ny zaza izy sady nitaraina tamin' i Jehovah hoe: Jehovah Andriamanitro ô, mifona aminao aho, aoka hody aminy indray ny ain' ity zaza ity. 22 Ary Jehovah nihaino ny feon' i Elia, dia nody taminy indray ny ain' ny zaza, ka dia velona izy." (1Mpanj. 17.19-22, Ny Baiboly)
Fitsanganan' olona maroModifier
Ny Lohasahan' ny taolana maina, sary nataon' i Quentin Metsys the Younger, taona 1589.
Naminany ny amin' ny hitsanganan' ny olona maro amin' ny maty ny mpaminany Ezekiela araka ny voasoratra ao amin' ny Bokin' i Ezekiela:
"7 Dia naminany aho araka izay efa nandidiana ahy, ary nony efa naminany aho dia injany! nisy feo, ary, indreo, nihetsiketsika sady nifanatonatona ny taolana, samy nanatona ny taolana namany avy. 8 Ary hitako fa, indro, naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofonaina tao aminy. 9 Dia hoy Izy tamiko: Maminania amin' ny fofonaina, eny, maminania. ry zanak' olona, ka ataovy amin' ny fofonaina hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Manatona avy amin' ny rivotra efatra, ry fofonaina, ka tsotsofy ireo voavono ireo, mba ho velona izy. 10 Dia naminany araka izay efa nandidiany ahy aho, ka dia nidiran' ny fofonaina ireo ka velona, dia nijoro tamin' ny tongony izy maro be dia maro be tokoa." (Ezek. 37.7-10, Ny Baiboly)
Ao amin' ny Bokin' i Daniela dia ahitana firesahana ny amin' ny fitsanganan' ny olona tsirairay amin' ny maty:
"Fa mandehana ianao mandra-pihavin' ny farany; fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho ao amin' ny anjaranao amin' ny andro farany." (Dan. 12.13).
"2 Ary maro amin' izay matory ao amin' ny vovoky ny tany no hifoha: ny sasany ho amin' ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin' ny henatra sy ny latsa mandrakizay. 3 Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay mamerina ny maro ho amin' ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria." (Dan. 12. 2-3).
Fananganan' i Jesoa ny zanakavavin' i Jairo tamin' ny maty, sary nataon' i Ilia Répine (1871).
Nanangana olona vitsivitsy amin' ny maty i Jesoa (na Jesosy) ka fiverenan'ny olona amin' ny vatana sy ny fiainana talohan' ny nahafatesana izany. Maro ireo olona voalaza fa nitsangana tamin' ny maty ka isan' ireo ny zanaka lahin' ilay vehivavy mpitondra tena (Lio. 7.11-15) sy i Lazarosy (na Lazara) avy any Betania (Joa. 11.38-44) ary ny zanakavavin' i Jairo (Lio. 8.49-56). Fahavelomana manam-petra ihany no vokatr' izany fa tsy fahafoanan' ny fahafatesana ho amin' ny fiainana mandrakizay.
Fitsanganan' i Jesoa tamin' ny matyModifier
Fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty, sary nataon'i Luca Giordano.
Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa tamin' ny marainan' ny andron' ny Paska jiosy taorian' ny fahafatesany tamin' ny nanomboana azy amin' ny hazo fijaliana; ary zava-dehibe indrindra amin' ny finoana kristiana izany satria antom-pisiany.
Ny finoana kristiana dia miorina amin' ny fampianarana momba ny fitsanganan' i Jesoa Kristy tamin' ny maty (1Kôr. 15.13-19). Ahitana fitantarana momba ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty ny Filazantsara efatra.
Ny finoan' ny Kristiana ny fitsanganana amin' ny maty dia miorina amin' ny voasoratra ao amin' ny Testamenta Vaovao, indrindra ny ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio (Mat. 23.1-10), ny Epistily ho an' ny Rômana (Rôm. 1.4), ny Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana (1Kôr. 15.1) izay maneho ny fasana foan' i Jesoa telo andro taorian' ny nahafatesany, sy ny fisehoan' i Jesoa tamin' ireo mpianany. Ireo fitantarana ireo dia entina maneho fa tsy mpaminany sahala amin' ireo mpaminany hafa i Jesoa izay nandresy ny fahafatesana fa izy no Mesia.
Fitsanganan' ny maty niaraka tamin' ny an' i JesoaModifier
"52 ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin' ny olona masina izay efa nodi-mandry no natsangana, 53 ka nivoaka avy tao amin' ny fasana ireo taorian' ny nitsanganan' i Jesoa, dia nankao amin' ny Tanàna Masina ka niseho tamin' ny maro." (Mat. 27.52-53).
Fitsanganana amin' ny maty amin' ny andro faranyModifier
Amin' ny eskatôlôjia kristiana dia amin' ny andro farany no hananganana ny maty rehefa voapetraka ny Fanjakan' Andriamanitra. Ny Epistily nosoratan' i Paoly no mamelabelatra ny fampianarana sy ny finoana ny fitsanganan' ny vita batisa ho amin' ny fahavelomana.
Ny fanavotan' i Jesoa ny olombelona dia vita miaraka amin' ny fiverenany any amin' ny Rainy. Hitsangan-ko velona ny maty rehetra ka izay nanao ny tsara hitsangana ho amin' ny fiainana fa ny mpanao ratsy kosa hitsangana ho amin' ny fitsaram-panamelohana amin' ny andron' ny Fitsarana farany (Joany 5.29).
Niady hevitra ireo Kristiana tany am-piandohana ny amin' ny fitsanganan' ny vatana na ny tena amin' ny maty. Nilaza mazava ny apôstôly Paoly fa hitsangana ny vatan' ny olona (1Kôr. 15; 1Tes. 4.14-16). Ny Apôkalipsin' i Joany (Apô. 20.12) sy ny Filazantsara araka an' i Joany (Joa. 5.21-29) koa dia miresaka ny amin' izany.
Ao amin' ny fanekem-pinoanaModifier
Tamin' ny fotoana nivoaran' ny fivavahana kristiana dia nisy ireo tsy nino ny fitsanganan' ny vatana amin' ny maty ka nilaza fa fitsaganana ara-panahy ihany no hisy ka isan' izany ny fampianaran' ny gnôstisisma sy ny an' ny manikeisma izay noheverin' ny Fiangonana tamin' izay ho nanao fampianaran-diso. Noraiketina ao amin' ny fanekem-pinoana maro ny finoana ny fitsanganan' ny maty ho velona sy ny fiainanana mandrakizay, isan' izany ny Fanekem-pinoana apôstôlika sy ny Fanekem-pinoana nikeana (na niseana) ary ny Fanekem-pinoana atanasiana.
Ao amin' ny Fanekem-pinoana nikeanaModifier
Hamafisin' ny Fanekem-pinoana nikeana ny fitsanganan' ny tena amin' ny maty: "Ary izaho miandry ny hitsanganan' ny maty sy ny fiainan-ko avy." (Dikan-teny katôlika)
Ao amin' ny Fanekem-pinoan' i AtanasioModifier
Hamafisin' ny Fanekem-pinoana atanasiana koa izany:
"Amin’ ny fiaviany dia hitsangan-ko velona miaraka amin’ ny vatany avy ny olombelona rehetra ka hampamoahina amin’ ny asa nataony avy: ireo izay nanao ny tsara hankany amin’ ny fiainana mandrakizay, ireo izay nanao ratsy any amin’ ny afo mandrakizay."
Ao amin' ny Fanekem-pinoana apôstôlikaModifier
Izao kosa ny voalaza ao amin' ny Fanekem-pinoana apôstôlika:
"Mino (...) ny fitsanganan' ny tena amin' ny maty ary ny fiainana mandrakizay." (Dikan-teny prôtestanta)
Fitsanganan' i Jesoa ho velona
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitsanganan-ko_velona_(kristianisma)&oldid=1036456"
Dernière modification le 22 Aogositra 2021, à 12:03
Voaova farany tamin'ny 22 Aogositra 2021 amin'ny 12:03 ity pejy ity.